ओठ का’लो भएर है’रान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस - Nawalpur Dainik
ओठ का’लो भएर है’रान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस
काठमाडौं- हाम्रो शररिको म’हत्वपुर्ण अं’ग भनेको ओठ हो । ओठ राम्रो भयो भने हरेक मानिस सुन्दर देखिन्छ । उमेर ले वा अन्य वि’भिद कारणले गर्दा ओठको रँ’ग ब’दलिने हुन्छ ।अनियमित खानपानले धु’म्रपानको अ’सरले गर्दा पनि यसको रङ ब’दलिने गर्दछ । प्रत्येक मानिसहरुले आफनो ओठ सुन्दर राख्न प्रा’क्रतिक रङ फर्काउन विभिन्न क’स्मेटिक सामग्री प्रयोग गर्छन् । तर, केही त्यस्ता उ’पाय पनि छन्, जसले तपाईंको प्राकृतिक च’मकलाई ओठमा फ’र्काउन सक्छ ।
Prevफागुन ०९ गते आइतबार यस्तो छ राशिफल
Nextशरिरका यी ६ अं’ग ठूला हुने महिला कहिल्यै न’छोड्नु !